उडुसले दिक्क बनाएको छ ? यस्ता छन् उडुस भगाउने घरेलु विधि – Enepali Samchar
उडुसले दिक्क बनाएको छ ? यस्ता छन् उडुस भगाउने घरेलु विधि
November 14, 2020 adminLeaveaComment on उडुसले दिक्क बनाएको छ ? यस्ता छन् उडुस भगाउने घरेलु विधि
उडुस बारेमा सोच्दा पनि कतिपयलाई रातभर निद्रा नै लाग्दैन । उडुसको टोकाइबाट शरीर चिलाउने, सुन्निने तथा एलर्जी हुने गर्छ ।उडुस सानो र छिट्टै लुक्ने परजीवी भएकाले यसलाई खोजेर निर्मूल पार्न एकदमै कठिन हुन्छ । एउटा माउ उडुसले आफ्नो जीवन कालभर ५ सय अण्डा पार्छ । ती अण्डाबाट निस्कने बच्चाले पछि फेरि अण्डा निष्कासन गर्छ।
कार्तिक ३० गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
कमाइभन्दा बढी खर्च छ ?साथमा पैसा टिक्दैन : यसरी बढाउन सकिन्छ बचत
अब इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट कामदार लैजाने: यस्तो छ इजरायल जाने प्रक्रिया पुरा हेर्नुहोस्
काठमाडौं उपत्यकामा पुनः लकडाउन लगाउन उपत्यका मेयर फोरमले दिएको सुझावप्रति सरोकार वालाहरुले जनाए यस्तो कडा आपत्ति